कोपा अमेरिका : तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिना र चिली प्रतिस्पर्धामा, को होला तेस्रो ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलकोपा अमेरिका : तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिना र चिली प्रतिस्पर्धामा, को होला तेस्रो ?
ब्राजिलमा जारी ४६औं संस्करणको कोपा अमेरिका कपको तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिना र चिलीले खेल्ने भएका छन् । बिहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा पेरुविरुद्ध पराजित भएपछि चिलीले अर्जेन्टिनासँग भेट पक्का गरेको हो ।
अर्जेन्टिना भने पहिलो सेमिफाइनलमा उपाधिको प्रमुख दाबेदार टोली ब्राजिलसँग हार ब्यहारेसँगै तस्रो स्थानका लागि लड्ने भएको हो । आफ्नै भूमिमा भइरहेको कोपामा ब्राजिलले अर्जेन्टिनालाई २–० ले हराएको थियो ।
तेस्रो स्थानका लागि भिड्न लागेका चिली डिफेन्डिङ च्याम्पियन टोली हो भने अर्जेन्टिना साबिकको उपविजेता हो । सन् २०१६ को कोपा अमेरिका कपमा चिलीले अर्जेन्टिनालाई हराउँदै कोपा अमेरिकाको उपाधि हात पारेको थियो । यसअघि उपविजेतामै चित्त बुझाएको अर्जेन्टिना उपाधि जित्ने होडमा थियो तर ब्राजिलसँग हारेसँगै उसको सपना चकनाचुर भएको थियो ।
यसपटक सेमिफाइनलमा ब्राजिलसँग हारेको अर्जेन्टिना चिलीमाथि चिलीमाथि हारको झोँक पोख्न चाहान्छ । यसैगरी ऊ चिलीसँग उपाधि भिडन्तमा ब्यहोरेको हारको बदला लिने दाउमा छ । तर, चिली भने अर्जेन्टिनामाथि जित कायमै राख्ने दाउमा छ ।
चिली र अर्जेन्टिनाबीचको खेल नेपाली समयअनुसार शनिबार राति १२ः४५ बजे हुनेछ ।